चार दिनदेखि बेपत्ता दम्पत्ती अझै भेटिएनन्, के भन्छ प्रहरी ? « Janata Samachar
चार दिनदेखि बेपत्ता दम्पत्ती अझै भेटिएनन्, के भन्छ प्रहरी ?
महोत्तरी । चार दिनदेखि बेपत्ता पिपरा गाउँपालिका–५ सहोडवाको वृद्ध दम्पतीको अझै पत्ता लागेको छैन । सोमबार देखि हराइरहेका पिपराका ६५ वर्षीय मोसाफिर झा र उनकी पत्नी ६० वर्षीया गीतादेवीको अवस्था बारे प्रहरीले अझै पत्ता लगाउन सकेको छैन ।
उनीहरु सोमबार रातिदेखि घरमा सुतिरहेकै अवस्थाबाट बेपत्ता छन् । बुढाबूढी मात्रै घरमा सुतिरहेका अवस्थामा बेपत्ता पारिनु र उनीहरुको ओछ्यान र चौकसमा रगतका छिट्टा देखिनुले घटना रहस्यमय भएको भन्दै प्रहरीले मंगलबार बिहानैदेखि व्यापकरुपमा खोजतलास गरिहेको जनाएको छ ।
प्रहरीले गाउँको चारैतिरको वन चौर, झाडी, खोलानाला र छिमेकी गाउँ तथा जिल्लाको विभिन्न स्थानमा समेत व्यापकरुपमा खोजी गरिसकेको तथा अहिलेसम्म कुनै सुराक फेला नपरेको बताएको छ ।
वृद्ध दम्पती एउटा मोही जग्गासम्बन्धी मुद्दामा साक्षी गवाही रहेका कारण उनीहरुको हत्या गरी शव बेपत्ता पारिएको हुन सक्ने स्थानीय बासिन्दाले आशंका गरेका छन् । उनीहरुको अवस्थाबारे अनुसन्धानका लागि अहिलेसम्म २० जनालाई झिकाई आवश्यक सोधपुछ गरिसक्दा पनि कुनै पत्तो नलागेको प्रहरीको भनाइ छ ।